Window iko silica/quartz jikọtara ọnụ
Prism akụkụ aka nri
Ụlọ elu Prism
Oghere mkpọda okpukpu abụọ
Lensị-convex okpukpu abụọ
Anya anya nke Plano-Concave
Igwe anya nke Plano-Convex
Ihe nzacha Bandpass
650nm warara bandpass filter
850nm warara bandpass filter
940nm warara bandpass filter
LP 420nm nzacha
LP 450nm nzacha
LP 470nm nzacha
LP 550nm nzacha
LP 630nm nzacha
LP 780nm nzacha
Ihe nzacha ngafe dị mkpụmkpụ
470nm mkpụmkpụ ngafe nzacha
550nm mkpụmkpụ ngafe nzacha
900nm mkpụmkpụ ngafe filter
Igwe ihe osise na igwe igwe CNC
On Oct 7,2021, Shandong Yanggu Constant Crystal Optic .Inc butere abụọ tent nke CNC ihe osise na-egwe ọka igwe , ọ dị mfe ime ka ọtụtụ ụdị nke shapes ngwa anya enyo enyo , akụrụngwa . Mkpa ọ bụla, ị nwere ike iziga anyị eserese gị, anyị ga-ehota gị.
SYCCO ga-aga 2021 CIOE ngosi na Shenzhen City
Anyị SYCCO ga-aga 2021 CIOE ngosi na Shenzhen City on si Sep 16-18 , anyị ụlọ ntu NO. bụ :3A07 . Daalụ ileta anyị!
Kedu ihe nzacha anya?
Enwere ụdị nzacha anya atọ: ihe nzacha mkpirisi, ihe nzacha ogologo, na nzacha bandpass. Ihe nzacha nke mkpirisi na-enye ohere ogologo wavelength dị mkpụmkpụ karịa ogologo wavele nke ebipụrụ ka ọ gafere, ebe ọ na-eme ka ogologo wavele ogologo gafere. N'aka nke ọzọ, ogologo ...
Window ngwa anya bụ ihe eji arụ ọrụ, mgbe ụfọdụ ngwa anya dị larịị, dabere na mkpebi achọrọ,) mpempe transperent (maka mmasị ogologo ogologo ogologo, ọ bụchaghị maka ọkụ a na-ahụ anya) ngwa anya na-enye ohere ka ọkụ banye na ngwa anya na ...
Uru nke Calcium Fluoride - oghere CaF2 na windo
Enwere ike iji Calcium Fluoride (CaF2) maka windo anya, lenses, prisms na oghere na mpaghara Ultraviolet ruo Infrared. Ọ bụ ihe siri ike dịtụ, nke siri ike okpukpu abụọ karịa Barium Fluoride. A na-akụ Calcium Fluoride ihe maka ojiji infra-red site na iji gwupụtachara agbapụta.
Teknụzụ nchacha enyo anya
A na-akụ iko anya nke ọma site na mmiri mmiri na-egweri, elu enyo anya nwere oghere mgbape maka ọkpụrụkpụ 2-3 m, ya mere, usoro ikpochapu oyi akwa bụ maka polishing. Usoro nke egweri na polishing bụ otu, ma e wezụga maka t ...